सदनमा ‘नागरिकताविहीन नागरिक’का कुरा | Bimala Rai Paudyal
‘यस्ता कुरामा फ्लोर क्रस गरौँ, अझैँ पितृसत्तालाई नै बोकेर हिँड्ने’
सदनमा उठान हुने विषयहरू मध्ये ‘केही फरक, केही नयाँ’ ढंगले प्रस्तुत भएका गम्भीर विषयलाई इकागजले ‘आजको प्रस्तुति’को रुपमा प्रकाशित गर्छ । आजको प्रस्तुतिमा विमला राई पौड्याल ।
काठमाडौँ- राष्ट्रिय सभा नवौं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा ‘नागरिकताविहीन नागरिक’को विषय उठेको छ । राष्ट्रिय सभाकी सांसद विमला राई पौड्यालले यो विषय उठान गरेकी हुन् ।
‘यदि दलीय सहमति नजुटेर नागरिकताको विधेयक पास गर्न सकेका छैनौँ भने फ्लोर क्रस गर्ने चलन चलिसकेको छ । यस्ता कुरामा फ्लोर क्रस गरौँ । जसले जनताको टड्कारो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्छ’, पौड्यालले भनेकी छन्,’आमाको नाममा नागरिकता दिनु भनेर संविधानले भनिसकेको छ भने विधेयक चाहिँ किन पास हुँदैन । कि हामी सवै पितृसत्तालाई नै बोकेर हिँड्ने मान्छे छौँ यहाँ ?’
पौड्यालको सम्बोधन :
अधिवेशन सुरु हुने भनेपछि बिहानैदेखि मेरो मोबाइलमा एसएमएस आउँछ । त्यसमा नेपाली पीडित युवाहरूको अनुरोध हुन्छ– यसपालिको अधिवेशनबाट नागरिकताको विधेयक पारित गरिदिनुप¥यो । ६ लाख त्यस्ता युवाको प्रतिनिधित्व गरेर हामीलाई एसएमएस पठाउनुहुन्छ ।
नागरिकताको विधेयक प्रतिनिधि सभामा तीन साढे वर्षदेखि थुप्रिएको छ । ती युवाले मौलिक हकको कुनैपनि अधिकार स्वतन्त्र भएर उपभोग गर्न पाएका छैनन् । किनभने, उहाँहरूसँग नागरिकता छैन । ती नागरिकता नहुने युवाहरू धेरैजसो एकल आमाका सन्तान हुन् ।
संविधानले भनेको छ– नागरिकलाई नागरिकता लिनबाट बन्चित गराइदैन । आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता लिन पाइन्छ । तर, संविधान जारी भएको पाँच वर्ष भइसक्दा पनि यी कुरा लागू हुन सकेको छैन । दलीय सहमतिको नाममा ५ लाख नागरिक हुने युवाहरूलाई नागरिकताविहीन बनाएर राख्न मिल्छ ? यो एकदमै ठूलो अपराध भइरहेको छ । हामी यहाँ संसद्मा बस्ने सांसदहरू कोही पनि नागरिकताविहीन छैनौँ । नागरिकताविहीन भएको भए हामी यहाँ आउने थिएनौँ ।
हाम्रा छोराछोरी नागरिकताविहीन छैनन् । त्यसकारण यसले हामीलाई कति छोएको छ मलाई शंका लाग्न थालेको छ । होइन भने नागरिकताको विधेयक यतिबेला पास भइसक्नुपथ्र्यो । ती युवालाई के जवाफ दिने हामीले ? हाम्रो जवाफदेहिता कहाँ हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
यदि दलीय सहमति नजुटेर नागरिकताको विधेयक पास गर्न सकेका छैनौँ भने फ्लोर क्रस गर्ने चलन चलिसकेको छ । यस्ता कुरामा फ्लोर क्रस गरौँ । जसले जनताको टड्कारो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्छ । आमाको नाममा नागरिकता दिनु भनेर संविधानले भनिसकेको छ भने विधेयक चाहिँ किन पास हुँदैन । कि हामी सवै पितृसत्तालाई नै बोकेर हिँड्ने मान्छे छौँ यहाँ ?